UMusque: Isidlali sesimanje futhi sihle, kepha ... | Kusuka kuLinux
UMusque: Umdlali wesimanje futhi omuhle, kodwa ...
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones
Ngizibona nginguMelomaniac kusukela ngazalwa, ngakho-ke isidlali somculo esingenye yezinhlelo zokusebenza engingakwazi ukuphuthelwa yikhompyutha yami.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule Ngibhalile cishe Amarok, Clementine nesidlali sami sekhanda samanje, ICantata. Kwamanye wamazwana umsebenzisi akhulume ngawo umculo, futhi bengifuna ukwazi ngakho ngiyifakile bese ngishiya okuvelayo kimi.
umculo lakhiwe ngu UFlavio Tordini, umbhali wezicelo waziwa kancane njengoba kunjalo UMinitube y UMusictube.
Eqinisweni, umculo Kuyathakazelisa ngoba inikela ngezinguqulo ze- Windows, OS X y I-GNU / Linux, futhi ngenkathi iminikelo yamukelwa eyokugcina, kokunye kunenketho yokuyithenga.
Ngokusobala sikhuluma ngomdlali okuthi ngokubuka nje, siyazi ukuthi ifuna ukuba yindlela elula futhi engatheni iTunes. Futhi ngicabanga ukuthi iyafeza inhloso yayo, elula futhi elula engenakwenzeka.
Isikhathi sokuqala lapho sigijima umculo Njengoba kunengqondo, isicela ukuthi sibeke ifolda lapho siqoqa khona umculo wethu:
Esimweni esijwayelekile, umculo Uzokwazi ukulanda ama-Album Covers nolwazi olumayelana nabo kusuka Okokugcina.fm, njengoba kungabonakala esithombeni esiqala le ndatshana, kepha kimi, lesi sinyathelo sikhohliwe.
Uma iqoqo lethu selilayishiwe sizoba nokuthile okufana nalokhu:
Injini yokusesha ibuyisa imiphumela engezansi kwebhokisi lokusesha hhayi endaweni yabaculi, futhi uma sesikhethe lokho esifuna ukukuthola, lapho sichofoza ku-albhamu, sifinyelela amazinga amathathu: Umculi »I-albhamu» Uhlu lwadlalwayo.
Njengoba bengisho, izinketho ziyindlala impela, uma kungenjalo ziyize. Ngokwenketho ngiqonde ukuthi angikwazanga ukuthola indlela yokuya umculo ubenesithonjana kuthileyi wesistimu, noma ulayishe isithombe se-albhamu endaweni yangakini.
Eqinisweni, kufayela lokumisa elitholakala ku- /home/tu_usuario/.config/Flavio Tordini / akukho okuningi ongakubona.
Azikho izinketho ezingeziwe futhi kukhawulwe kuphela ekunikezeni isenzo esiyisisekelo sesidlali somculo, okungukuthi, ukudlala okungahleliwe, ku-loop, futhi akuvumeli nami ukuthi ngihlunge ngohlobo lomculo noma. Ama-albhamu anga-odwa ngamagama, ukuthandwa, unyaka, inani lezingoma noma inani lezikhathi ezidlalwe, kepha akukho ngaphezu kwalokho.
Noma kunjalo umculo Yebo, ikuvumela ukuthi uthole imininingwane ngabaculi kwi-Intanethi, kepha ngokuqinile, ngoba asikwazi ukuguqula imithombo oyisebenzisayo.
Singathumela idatha yezingoma esizilalela kuLast.fm, sikwazi ukudlala isidlali kusikrini esigcwele futhi siyeke ukudlala ngemuva kwethrekhi ethile, kungabe kusaba khona.
Uma ungabona ngeso lenyama isidlali esilula, sihle kakhulu ngokubukeka, kepha (kuhlale kune-a) ngaphezu kwakho konke, ukumiswa okuncane kakhulu, yingakho kungesikho phakathi kwezinketho zami zokuqala.
Yize ilula, isebenzisa izinsizakusebenza ezimbalwa, cishe imemori engama-95 MB edlula kude ama-75 MB Clementine kanye no-45 MB we ICantata.
Vele, okufanele ukwenze, wenza kahle. Eqinisweni, ngenxa yezici zayo, kusebenza njengenketho engcono kune Noise ukuze I-ElementaryOS, ngoba ngaphezu kokuhlangabezana nezidingo ze-minimalism zale distro, izinze kakhulu.
Kuyinto yesimanje, yebo, kodwa ngokunambitheka kwami ​​ayikaqedi.
Kusuka ekhasini lephrojekthi kuphela isifaki esitholakalela i- Ubuntu, kodwa ngaphakathi Arch singayihlanganisa kusuka I-AUR isebenza kukhonsoli:
Angazi ukuthi konke okunye ukusabalalisa okungasekelwe Ubuntu o Arch unendlela yokuyifaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » UMusque: Umdlali wesimanje futhi omuhle, kodwa ...
I-Port of PowerAmp (i-Android) iye kwiLinux kabi !! Ngikuthola kukuhle kakhulu kokuhamba phambili ku-Android, mhlawumbe ngolunye usuku singakubona njengenye yezindlela (eziningi) esinazo eLinux njengesidlali somculo ...
Angazi, ngivumelana no-Elav, eyisisekelo kakhulu ekunambithekeni kwami. Ngicabanga ukuthi abathuthukisi abaningi badida ubuncane bobuhle ngokusebenza, okwakamuva kubaluleke kakhulu (kakhulu) ngaphakathi kohlelo.
Ngine-version 1.3 ku-Ubuntu 12.04 (yakamuva kakhulu) futhi ngibona ukuthi yehluke kanjani kumakhava. Ngine-version 1.2 eTrisquel 6 futhi angikaze ngibe nezinkinga ngezembozo nakho. Ngokusobala umdlali akaphelele, kepha okuhle engikubonile.
Vele awunazo izinkinga. Lowo onenkinga yimi ngokuxhumeka kwami ​​kwe-Intanethi nemikhawulo enginayo 😀
Noma: ukubhuqa? kuphi? xD ngendlela engizoyivivinya ngayo e-archlinux, mhlawumbe bazokwethula isibuyekezo esilungisa lokho a kuyindaba yokulinda kuphela
Wooow kudla izinsiza! I-xD ngithanda ukubika ukusetshenziswa ngokweqile kwezinsizakusebenza, kepha angilungile neze ngesiNgisi: S
kulabo abafuna ukushicilela izimbungulu, amaphutha noma okunye, kumenyu kunenketho, Sanibonani!
Kubonakala kimi njengomdlali omuhle, kepha ayinaso isilinganisi, kubalulekile ukumisa umsindo ngokuya ngohlobo lomculo esilulalelayo noma wenze ngokwezifiso umsindo ukunambitha nezidingo zethu
masisebenzise i-linux kusho
Sengimazi uMusique iminyaka eminingana futhi ngiyawuthanda, yize ngeqiniso angisenamculo kukhompyutha yami. Kulezi zinsuku, ngeDeezer noma iGrooveshark akusenangqondo.
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukuba nokuthile endaweni yangakini, ngine-5gb yomculo eMusique uma kwenzeka i-inthanethi yami ihluleka (okuyinto engavamile ukwenzeka) .Ngivame nokusakaza kakhulu kwi-bandcamp, jamendo nase-grooveshark, eyokugcina ku-html5 http://html5.grooveshark.com/
Nginama-gigabyte angu-132 omculo futhi cishe unyaka nezinyanga ngishintshele kwiLinux futhi kufanele ngisho ukuthi ukuphela kwento engiyikhumbulayo kumawindi, OKUPHELA KWAYO, yi-iTunes, okungeyona iMicrosoft.
Akunasicelo esisodwa seLinux esisondela kuso, ngakho-ke bekufanele ngikhokhele i-clementine, ngoba ngenza lokhu kuphela windows ukwenza i-akhawunti yami ye-iTunes.
Ngifisa sengathi i-Apple ibe nethuba lokuthuthukisa isitolo nomdlali endaweni yesikhulumi se-Linux, noma ukuthi umdlali we-Linux ofana ne-iTunes angavela. : - /
132gb endaweni, kuhle, masingalahli la masiko.
[Umbono] Sidinga izinhlelo zokusebenza eziningi kanye nokuhlangana okungaguquguquki ku-GNU / Linux
Ideskithophu Engcono Kakhulu ye-Linuxero: Februwari 2014 - Imiphumela